China, Gunyana 17, 2009 Muvhuro, Mbudzi 9, 2020 Douglas Karr
Kana iwe wanga uri wakareba-kwenguva muverengi weblog rangu, iwe pamwe wakacherekedza dzimwe shanduko dzechangobva kuitika. Ndanga ndichikumbira rubatsiro rwevatsva mabloggi uye nekushandura iyo blog kubva my blog ku yedu blog. Nhasi raive danho rakakura kumberi neiri zano - iwe uchaona izvozvi kuti rangu blog rine dingindira nyowani!
Dhizaini inokatyamadza yakagadziridzwa nemumwe wedu chaiye, Jon Arnold Mutungamiri we Tuitive Boka. Akaita basa rakanaka rekutora kukosha kweblog. Iwe zvakare uchaona kuti iyo Peji yemunyori chitsva - kunyora yega yega mabloggi edu pamwe nekubatanidza kune yavo bio peji iyo inopa rumwe ruzivo nezve hunyanzvi hwavo uye bhizinesi.
Ini ndicharamba ndiri wekutanga blogger paBlog asi iwe uchaona yega yega yedu mamwe mabloggi achitumira ka2 kana ka3 pamwedzi. Chinangwa ndechekupa vaverengi vedu sarudzo yakasarudzika ye zvinobatsira kushambadzira mazano. Kunyangwe iwe uri mugadziri uchishanda pane CSS nyaya kana CMO kuyedza kusarudza inotevera analytics package yekudyara mairi - isu ticharamba tichipa ruzivo rwakakosha.
Kune mamwe maBloggi ekushambadzira kunze uko (ini ndinoteera ese!)… Zvimwe ndezvekuita mari online, zvimwe ndezvekuenderana nenhau dzekushambadzira, zvimwe ndezvekutengesa musangano uye whitepaper ruzivo. Mazhinji akanyanya niche kana enhau anotarisana. Chinangwa chedu ndechekuti ive goto blog yevatengesi kuti vavandudze kushambadzira kwavo uye vawane kudzoka kuri nani pane zvekudyara kwezvavanoita. Hatidi zuva rekupfuura kwausinga siya uine ruzivo rwekuwedzera bhizinesi rako kana kuita basa rako zvirinani! Nguva.
Nezvedu wedu Mufotori
Munzvimbo yese saiti, iwe unowana anoshamisa mapikicha evabloggi vedu, yakapihwa na Indianapolis mutori wemifananidzo Paul D'Andrea kubva PDA Photography. Paul akamisa pikicha yakazara nesu uye Andrew Bhora zvakatipa mukana wekupinda mumuseum yakavanzika mukati meAT&T Uchaona kuti edu ese mafoto ane kutaurirana zvishandiso kumashure kwedu - inotonhorera theme!
Lorraine uye Jon havana kukwanisa kugadzira iyo foto yeboka.
Zvizhinji zvichauya! Tichava neakaunganidzwa Zviitiko karenda (pamwe nezviitiko zvedu pachedu!), Tichave tichishanda padhuze kuti tipe premium yezvinyorwa kuSmall Indiana's Yekushambadzira peji, uye ndine chokwadi chekuti misangano yedu nemusangano zvichauya nekukurumidza!
Kana iwe uine chero zvikumbiro kana uchida kuendesa yako yega chinyorwa - ndapota tinya iyo bvuma bhatani!
Tags: nyanzvi dzekutengesaMarketing technology blogmatsva enhauwordpress theme
Iwe Uri Kudya 3 iwo Masitaera Ekudzidza?
Sep 18, 2009 pa 5: 08 AM
Dhizaini nyowani inotaridzika kunge yakanaka!
Sep 18, 2009 na4: 17 PM
Ndatenda Matt! Zvakanaka kunzwa kubva kwauri!
Sep 18, 2009 pa 6: 19 AM
Ndinoda chimiro chitsva. Yakachena kwazvo uye inyanzvi.
Sep 18, 2009 na12: 37 PM
Dhizaini dhizaini! Basa rakakura kune wese munhu anobatanidzwa.
Sep 18, 2009 na4: 16 PM
Thanks Kyle! Nyatso kukoshesa iwe kutora nguva uye kupa imwe mhinduro.
Sep 18, 2009 na3: 46 PM
tinokukwazisai nekutanga dingindira idzva. zvinotaridzika zvakanaka!
Ndatenda Jascha! Zvizhinji zvekuuya nekudzokororwazve!
Sep 18, 2009 na4: 35 PM
Vakaratidza saiti yako pamusangano weku blogga mangwanani ano uye ndakafunga kuti mukomana aenda kune isiri iyo webhusaiti! Wow, kuvandudza kwakanaka.
Sep 18, 2009 na7: 38 PM
Dhizaini nyowani inoratidzika kunge yakanaka! Jon akaita basa rakanaka.
Sep 19, 2009 na6: 13 PM
Kutaridzika kukuru. Kuita zvakanaka!!